Sulaymanka Jaamacada Camuud Ma Hogaamiye Beeleedbaa? | Awdalmedia.com
Sulaymanka Jaamacada Camuud Ma Hogaamiye Beeleedbaa?
Waxyaabaha aadka aad ula yaabayso ee ka dhacaya Somaliland waxa ka mid ah in ragii aqoonyahanka ahaa ee la filayay in ay umadan u jiheeyaan oo ay tusaalayaal wanaagsan u noqdaan oo sidii beeldaajiyayaasha qabiilada ay u fekerayaan isla markaana isku haystaan rag siyaasiyiin ah. Gudoomiyaha jaamacad CamuudSaleebaan Axmed Guleed wax uu ka midyahay raga ku sifoobay cunsuriyada iyo qabiilnimada ee had iyo jeer umada gobolka Awdal kunool kalasoocsooca iyo iska horkeenka ka dhexwada Waxa uu mudaba abaabulayy shirar beeleedyo qarsoon oo uu beeshiisa kulajiray kuwaasi oo intooda badani ay ahaayeen nuxurkoodu sidii kacdoon ugu samayn lahaayeen siyaasada gobolka Awdal ee uu hormoodka ka yahay Md Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici.
Tusaale ahaan wasiirada maaliyada Somaliland ayaa dhawaan xilkaqaadis kusamaysay labanin oo wasaaradaasi katirsan kuwaasi oo mid uu ahaa madax kastamka Borama kakalana uu yahay isuduwaha wasaaradaasi ee gobolka Awdal,. Ragaasi oo ka soo jeeda beesha Makaahiil. Arintaasi awgeed waxa pro, Sulaymaan Axmed guuleed iyo Cabdiraxmaan Tolwaa ay dacwad ka dhan ah Madaxweyneku xigeenka Somalilan ula tegeen Wasiir Samasam. Ilowaredyo goobjoog ahaa ayaa tibaaxaya in ay ka dalbeen in xilka lagu soo celiyo iyaga oo sheegay in Saylici uu beeshooda ka aar goosanayo, nasiib daro se wasiirada oo xaqiiqada og waxa ragaasi looga qaaday ayaa u sheegtay in uusan Saylici waxa kala socon arinta balse iyadu ay bedeshay una sheegtay in madax kastamka Borama ee ay bedeshay uu hanti qaran lunsaday isla markaana isuduwahana meelkale uun loo badalay.
Kadib markii ay wasiirada ka soo caalwaayeen waxa ay u yimaadeen iyo madaxweynaha cusub ee aan wali xilka loo dhaarin Muuse Biixi Cabdi iyaga oo markale dacwaynaya Saylici, hase yeeshee Muuse Biixi oo si buuxda u yaqaana xumaanta ay u hayaan Saylici ragani maba dhagaysan waxana uu ku yidhi anigu waxba kama ogi arintan walina xilkii la iguma wareejin ee wasiiradii kula noqda.
Lama soo koobi karo dhacdooyinka kalafaqooqa ee uu ku kacay Saleebaan Axmed Guuleed tan iyo intii uu hayay jagada Gudoomiyenimada Jaamacad Camuud. Kuwa ugu waawayn ee uu cadaystay qabyaaladiisa waxa ka mid ahaa markii ay isqabteen gudoomiye kuxigeenkiisii hore ee ahaana aas aasayaashii Jaamacada Camuud Pro Axmed Xaasi Abiib, markaasi oo uu si badheedha ah ugu yidhi “Madaxweynaha dalku Daahir Rayaaale waa Beesha Makaahiil, Gudoomiyaha Gobolka Awdal Maxamuud Sheekh Cabdilaahi Cige waa beesha Makaahiil Maayerka degmada Boorama waa beesha Makaahiil, Aniga oo ah gudoomiyaha jaamacad Camuudna waxan ahay beesha makaahii ee maxaad iga qaadi kartaa.” Hadalkaasi oo wakhtigaasi markii uu joornaalka kusoo qoray profosor Axmed Xaasi waxa loo arkayay in uu been ka sheegayo isagauna wuu dafiray oo uu ka dhaartay. Kadibna pro Amed Xaaji waxa uu ka tegay Jaamacdii waxaan markiiba aas aasay jaamacada EELO university.
Runtii barigaa dadbadan uma ay garaabin Axmed Xaasi, haseyeeshee mudo kadib waxa maalinbamaalinta ka danbaysa soo ifbaxayay qabyaaladiisa iyo nacaybka kujira Salaeebaan. Waxa xusid mudan in ururka beelaha makaahiil uu gudoomiye kayahay ururkaasi oo ay kamidyihiin Cabdiraxmaan Tolwaa, iyo ragkale oo siyaasada Somaliland kusaaqaiday kana shaqeeya uun arimaha beesha Makaahiil ee ay ka soo jeedaan.